Home Wararka Waa maxay ujeedada isbahaysiga cusub (Shiikh Sharif, Fahad Yasin & X. Kheyre)?
Waa maxay ujeedada isbahaysiga cusub (Shiikh Sharif, Fahad Yasin & X. Kheyre)?
labadii asbuuc ee la soo dhaafay waxaa magalaada Muqdisho ka socday shirar qarsoodi ah oo ay abaabulkiisa wada lahayeen Xasan Cali Kheyre iyo Shiikh Sharif Shiikh Axmad. Kulamadaan ayaa waxa uu daba socday kulan horay ugu soo dhexmaray Xasan Kheyre iyo Fahad Yasin magalaada Istanbul ee dalka Turkiga.
Sawirada kulamadaan (Shiikh Sharif iyo Xasan Kheyre) ayaa qaar kamida lagu soo bandhigay baraha bulshada halka sawirada aan la soo bandhigin sawirada shirarka uu Fahad Yasin goobjooga ka ahaa. Shiikh Sharif ayaa laba asbuuc ka hor codsaday in uu iska casilo hogaanka Mudowga Musharaxiinta, laakiin markii danbe uu ka noqday.
Qorshaha uu Shiikh Sharif uga baxayo hogaanka Mdogwa musharaxiinta ayaa qayb ka ahaa go’aanada ka soo baxay shirarka qarsoodiga ah ee u socday sadaxda nin. Sida MOL loo xaqiijiyay waxaa jira talooyin uu soo jeediyay Fahad Yasin oo ahayd in Shiikh Sharif iyo Xasan Kheyre ay kooxda Nabad iyo Nolol ka dhigtaan qorsha labaad ee doorashada., hadii ayaga fashilmaan.
Sida MOL loo xaqiijiyay Fahad Yasin ayaa lacag gaaraysa $100,000 oo taageero ah ku wareejiyay Shiikh Shariif, lacagtaas waxaa loo soo dhiibay nin lagu sheegay magaciisa Cabdiraxmaan Jimcaale. Lacagta Fahad Yasin soo dhiibay ayaa Shiikh Sharif waxa uu qayb kamida u qaybiyay shaqaalaha ka shaqeeya ololahiisa doorashada.
“waa run in labo, labo kun na loo qaybiyay halka raga jooga Bayadhabo iyo Kismaayana loo diray laacg yar oo kun kun ah si ay isaga bixiyaan deynta hoteelada lagu leeyahay” sidaada waxaa yiri mid kmida shaqalaha ololaha Shiikh Sharif.
Waxa uu intaas ku daray, “Shiikh Aadan Madoobe oo deyn badan loo haystay ayaa insna loo diray lacag $8,700 taas oo loo xawilay.”
Shiikh Sharif ayaa ku sheegay lacagta soo gashay mid ay bixisay dowladaha isaga taageersan, taas oo ah been abuur uu ku qaldayo saaxbadiisa gaark ah.
Dhanka kale, Xasan Kheyre ayaa dhankiisa da’daal ugu jiray in la baa’biyo kiiska dacwada ee Ikraam Tahliil isaga oo aaminsan in hadii dacwada sii socoto ay isaga laguha la gali daynto. Waxaana muuqata in uu gacan yare u noqday Fahad Yasin isaga oo ka fakaraya danahiisa gaarka ah.
Farmaajo ayaa dhankiisa soo dhaweeyay heshiiska “marin habaabinta” isaga oo rumeysan in ay abuurayso kala shakin ka dhex-dhalata Midowga Musharxiinta oo haatan noqday libaax miciyo beelay. Farmaajo ayaa caan ku ah in uu kala furfuro mucaaradka isaga oo markastaana ku guulaysta in uu iska horkeeno kooxaha isaga ka soo horjeeda.